Luck-Key (2016) | MM Movie Store
ယှနျးဂယျြဆောငျးဆိုတဲ့လူငယျလေးတဈယောကျဟာအလုပျမှနျသမြှာမှာလညျး မအောငျမွငျ အကွှေးတှကေလညျး ပတျလညျဝိုငျး ဂရုစိုကျမယျ့သူလညျးမရှိ တှယျရမဲ့စုတျပွတျနတေဲ့ဘဝကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ သတျသဖေို့အထိတောငျကွိုးစားဖူးတယျ…သို့ပမေယျ့ မလုပျဖွဈ ဒီလိုနဲ့ တဈနတေ့ော့ အမြားသုံးရခြေိုးကနျကိုသှားရခြေိုးဖွဈတယျ…
သူရသှေားခြိုးတဲ့အခြိနျ လူတဈယောကျကိုသတိထားမိသှားတယျ… အဝတျအစားနဲ့ ပတျတဲ့နာရီကိုကွညျ့ရုံနဲ့ အရမျးခမျြသာပုံရတဲ့လူတဈယောကျကိုဆိုပါတော့… အဲ့ဒီလူဟာ တိုကျဆိုငျစှာပဲ ရခြေိုးခနျးထဲမှာ ဆပျပွာတုံးတဈတုံးကွောငျ့ လဲကပြွီး ခေါငျးနဲ့ကွမျးပွငျကိုရိုကျမိကာဆေးရုံရောကျသှားတယျ…
စိတျဓာတျပကျြယှနျးဂယျြဆောငျးတဈယောကျ လဲကနြတေဲ့သူရဲ့ရခြေိုးခနျးအဝတျအစားထားတဲ့အခနျးသော့ကို ခကျြခငျြးလဲလိုကျတယျ..တခွားသူက ဆေးရုံရောကျသှားပမေယျ့ ယှနျးဂယျြဆောငျးအတှကျတကယျ့ပှပေါကျပဲ…
နာရီအကောငျးစား ပိုကျဆံအိပျထဲလညျး ပိုကျဆံအပွညျ့ပါတဲ့အပွငျကားအကောငျးစားရဲ့ GPS ကလညျး တနျဘိုးကွီးမွငျ့လှနျးတဲ့အိမျဆီကိုရောကျသှားစတေယျ… ယှနျးဂယျြဆောငျးဟာ ပစ်စညျးတှပွေနျပေးဖို့လုပျပမေယျ့ ပိုငျရှငျဖွဈတဲ့သူဟာ ကွမျးပွငျနဲ့ရိုကျမိတဲ့ဒဏျကွောငျ့ အတိတျမသှေ့ားတယျ…
ပွောရရငျ လူခငျြးခြိနျးလိုကျသလိုဖွဈသှားတာကို အခှငျ့ကောငျးယူပွီး ယှနျးဂယျြဆောငျးဟာ တခွားသူတိုကျခနျးမှာ ခပျတညျတညျသှားနလေရေဲ့…သူ့အပြျောတှဟော သိပျတော့ကွာကွာမခံပါဘူး…
တိုကျခနျးပိုငျရှငျဖွဈတဲ့အတိတျမနေ့တေဲ့သူဟာလကျနကျပေါငျးစုံ လူမိုကျတှနေဲ့ဆကျသှယျထားတဲ့ အခကျြအလကျပေါငျးစုံPassport ပေါငျးမြားစှာရှိနတေဲ့ ကွေးစားလူသတျသမားအဖွဈသိရှိပွီးတဲ့နောကျယှနျးဂယျြဆောငျးတဈယောကျ ဘယျလိုရှဆေ့ကျမလဲ…
အတိတျမသှေ့ားတဲ့ လူမိုကျကွီးကရော ဘယျလိုရှဆေ့ကျမလဲ…ဘယျလိုအန်တရယျတှကေရော သူတို့ကို ဆီးကွိုနမေလဲ…ကိုငျး အကျရှငျကားကွိုကျတဲ့သူတှေ ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦးဗြို့….
ယွန်းဂျယ်ဆောင်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာအလုပ်မှန်သမျှာမှာလည်း မအောင်မြင် အကြွေးတွေကလည်း ပတ်လည်ဝိုင်း ဂရုစိုက်မယ့်သူလည်းမရှိ တွယ်ရမဲ့စုတ်ပြတ်နေတဲ့ဘဝကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေဖို့အထိတောင်ကြိုးစားဖူးတယ်…သို့ပေမယ့် မလုပ်ဖြစ် ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တော့ အများသုံးရေချိုးကန်ကိုသွားရေချိုးဖြစ်တယ်…
သူရေသွားချိုးတဲ့အချိန် လူတစ်ယောက်ကိုသတိထားမိသွားတယ်… အဝတ်အစားနဲ့ ပတ်တဲ့နာရီကိုကြည့်ရုံနဲ့ အရမ်းချမ်သာပုံရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဆိုပါတော့… အဲ့ဒီလူဟာ တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ဆပ်ပြာတုံးတစ်တုံးကြောင့် လဲကျပြီး ခေါင်းနဲ့ကြမ်းပြင်ကိုရိုက်မိကာဆေးရုံရောက်သွားတယ်…
စိတ်ဓာတ်ပျက်ယွန်းဂျယ်ဆောင်းတစ်ယောက် လဲကျနေတဲ့သူရဲ့ရေချိုးခန်းအဝတ်အစားထားတဲ့အခန်းသော့ကို ချက်ချင်းလဲလိုက်တယ်..တခြားသူက ဆေးရုံရောက်သွားပေမယ့် ယွန်းဂျယ်ဆောင်းအတွက်တကယ့်ပွပေါက်ပဲ…
နာရီအကောင်းစား ပိုက်ဆံအိပ်ထဲလည်း ပိုက်ဆံအပြည့်ပါတဲ့အပြင်ကားအကောင်းစားရဲ့ GPS ကလည်း တန်ဘိုးကြီးမြင့်လွန်းတဲ့အိမ်ဆီကိုရောက်သွားစေတယ်… ယွန်းဂျယ်ဆောင်းဟာ ပစ္စည်းတွေပြန်ပေးဖို့လုပ်ပေမယ့် ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူဟာ ကြမ်းပြင်နဲ့ရိုက်မိတဲ့ဒဏ်ကြောင့် အတိတ်မေ့သွားတယ်…
ပြောရရင် လူချင်းချိန်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ယွန်းဂျယ်ဆောင်းဟာ တခြားသူတိုက်ခန်းမှာ ခပ်တည်တည်သွားနေလေရဲ့…သူ့အပျော်တွေဟာ သိပ်တော့ကြာကြာမခံပါဘူး…
တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတိတ်မေ့နေတဲ့သူဟာလက်နက်ပေါင်းစုံ လူမိုက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အချက်အလက်ပေါင်းစုံPassport ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားအဖြစ်သိရှိပြီးတဲ့နောက်ယွန်းဂျယ်ဆောင်းတစ်ယောက် ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲ…
အတိတ်မေ့သွားတဲ့ လူမိုက်ကြီးကရော ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲ…ဘယ်လိုအန္တရယ်တွေကရော သူတို့ကို ဆီးကြိုနေမလဲ…ကိုင်း အက်ရှင်ကားကြိုက်တဲ့သူတွေ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့….
Tale of the Nine Tailed (Season 1) အပိုငျး (၉)